Shabelle Media Network – Saraakiisha Dowladda oo sheegay inay kaabiga ku hayaan Buur-hakaba
Saraakiisha Dowladda oo sheegay inay kaabiga ku hayaan Buur-hakaba
maalik_som October 9, 2012
Buur-hakaba: (Sh.M.Network)— Saraakiisha Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay kaabiga ku hayaan Magaalada Buur-hakaba ee gobolka Bay.
Jeneral Ibraahim Aadan Yaroow oo la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa waxa uu sheegay in Ciidamada Dowladda ay ku sugan yihiin deegaanka Jameecada Dheenta oo 12-KM u jirta Magaalada Buur-hakaba ee gobolka Bay.
“Howlgalka u jeedkiisu waa inaan lagu daadin dhiig, Magaalo waliba waxa uu qorshaha yahay in si nabad galyo ah lagula wareego” sidaasi waxa yiri Sarkaal ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya. Saraakiisha ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay si aad ah u hubeysan yihiin islamarkaana ay gacanta ku dhigayaan Magaalada Buur-hakaba ee gobolka Bay.
Ciidamada Dowladda, Kenya iyo kuwa Raaskamabooni ayaa si nabad galyo ah kula wareegay Magaalada Kismaayo oo dad badani ay aaminsanaayeen in uu ku daadan karo dhiig badan, hase ahaatee Al Shabaab ay isaga baxeen inta aan la galin Magaalada ka hor.
Kulanka looga hadlayo ka hortaga dhibaatada Loo geysto Saxafiyiinta oo Galay Maalintiisii Labaad [ Sawirro ]
Muqdisho oo Lagu Xusay 50 sano Guuradii Aasaaskii Midowga Afrika War Saxaafadeed
Ra’isal Wasaare Saacid oo ka hadlay Mooshinkii Fashilmay iyo arrimaha Jubbooyinka
Banaan Bax Lagu soo dhaweynayo Go’aankii Baarlamaanka ee shalay oo ka dhacay Muqdisho